30,000 ton organic fatịlaịza mmepụta akara - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Usoro mmepụta kwa afọ nke fatịlaịza organic nke 30,000 bụ iji gbanwee ụdị mkpofu ahịhịa niile n'ime fatịlaịza organic site na usoro dị iche iche. Orlọ ọrụ fatịlaịza bioorganic nwere ike ọ bụghị naanị ime ka nri ọkụkọ na mkpofu ọkụkọ ghọọ akụ, na-eweta uru akụ na ụba, kamakwa belata mmetọ gburugburu ebe obibi na ịmịpụta uru gburugburu ebe obibi. Ofdị ahụ nwere ike ịbụ cylindrical ma ọ bụ dị okirikiri, nke dị mfe ibufe ma jiri. Enwere ike ịhọrọ ngwaọrụ gị dịka mkpa gị si dị.
Anyị na-enye usoro nhazi na imepụta ahịhịa nchekwa nchekwa ọhụụ maka fatịlaịza organic. Mmepụta akara igwe tumadi na-agụnye a hopper na feeder, a ọhụrụ echekwa granulation igwe, draya, a ala sieve igwe, a ịwụ ndoli, a eriri ebu, a nkwakọ igwe na ndị ọzọ inyeaka ngwá.
Akụ ọgaranya organic akụrụngwa
Akụrụngwa fatịlaịza Organic bara ọgaranya na akụrụngwa, nke a na-atụkarị ya na edemede ndị a. Enwere ike ijikọ ihe dị iche iche na ngwa ọrụ mmepụta dị iche iche:
1. Anụmanụ anụmanụ: dị ka ọkụkọ, ezi, ọbọgwụ, ehi, atụrụ, ịnyịnya, oke bekee, wdg, ihe ndị fọdụrụ n’anụmanụ, dịka anụ azụ, nri ọkpụkpụ, nku, ajị anụ, ahịhịa silkworm, ọdọ mmiri gas, wdg
2. Ugbo ala ubi: ahihia ahihia, rattan, nri soybean, nri rapese, nri achicha, nri melon silk, ude yist, ihe ndi ozo, wdg.
3. Industrial n'efu: wine slurry, mmanya fọduru, akpu fọduru, iyo apịtị, ọgwụ fọduru, furfural slag, wdg
4. Obodo sludge: apịtị osimiri, apịtị, apịtị apịtị, apịtị apịtị, ọdọ apịtị, humic acid, turf, lignite, sludge, ada uyi, wdg.
5. Ihe mkpofu ụlọ: ihe mkpofu kichin, wdg.
6. Diction ma ọ bụ wepụ: wepụ mmiri mmiri, azụ azụ, wdg.
1. A na-eji ihe na-eme ka mmiri na-eme ka mmiri na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-eme ka ọ bụrụ nke a na-eme ka ọ ghara iru mmiri.
2. Ngwunye igwe na-eme ka uzo di iche iche di elu, elu di nma, ike di elu. Adabara ejikọta dị iche iche granulators.
3. Ejikọtara usoro mmepụta niile site na eriri ebu na ngwa ndị ọzọ na-akwado ya.
4. Kọmpat Ọdịdị, anụ arụmọrụ, adaba ime ihe na mmezi.
5. Enwere ike ịhọrọ ngwaọrụ dịka mkpa gị.
The usoro na-agụnye gbaa ụka akụrụngwa, igwekota, granulation igwe, draya, oyi, ala sieve igwe, silo, n'ụzọ zuru ezu akpaka nkwakọ igwe, vetikal crusher, belt ebu, wdg The isi mmepụta usoro nke dum organic fatịlaịza na-agụnye: egweri nke ngwaọrụ → gbaa ụka → agwakọta nke ihe eji eme ihe (na-agwakọta ya na ihe ndị ọzọ na-eme ka mkpụrụ osisi, NPK≥4%, ihe a na-ahụkarị ≥30%) ulation granulation → nkwakọ ngwaahịa. Mara: usoro mmepụta a bụ maka ntụnye naanị.
Usoro ịgba ụka na-eme ka ihe mkpofu ahịhịa na-agbanwe kpamkpam. Enwere ike ịhọrọ plọg dị iche iche dịka ndị na-agagharị agagharị, ndị na-ekpo ọkụ okpukpu abụọ, plọg gwakọtara, hydraulic dumpers na ndị na-atụgharị ala nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ezigbo composting raw materials, venues and products.
2. Igwe igwe igwe
Akụrụngwa a gbara ụka na-abanye na igwe grinder kwụ ọtọ, nke nwere ike ịkụpịa akụrụngwa site na ọdịnaya mmiri na-erughị 30%. Na urughuru size nwere ike iru 20-30 iwu, nke osobo na granulation chọrọ.
3. Kwụ igwe
Mgbe ị gwerisịrị, gbakwunye ihe inyeaka dịka usoro ahụ si dị na ngwakọta. Kwụ igwe nwere abụọ nhọrọ: a uniaxial igwekota na abụọ-axis igwekota.
4. A ọhụrụ organic fatịlaịza granulator
Ngwunye granulation ruru eru nke igwe ahụ ruru 90%, nke kwesịrị ekwesị maka usoro dị iche iche dị iche iche. The compressive ike nke ahụ dị elu karịa nke disk granulation na drum granulation, na nnukwu * Tụkwasị ọnụego bụ ihe na-erughị 15%.
5. Round dara
Igwe na-agbakọta ọnụ nwere ike ịrụzi ma maa mma akụkụ ahụ granulation mgbe granulation gasịrị. Mgbe extruding granulation ma ọ bụ diski granulation usoro, mgbe na-atụba mkpokọta, fatịlaịza ahụ nwere ike ịdị nha nha, nhazi zuru oke, na-enwu gbaa ma dịkwa nro n'elu, nnukwu urughuru ume, na mkpụrụ osisi fatịlaịza dị elu dịka 98%.
6. Akọrọ na jụụ
Igwe igwe na-eme ka ahụ dị jụụ na-eme ka ahụ dị jụụ mgbe ọ kpọnwụchara, ma belata mmiri mmiri nke ahụ mgbe ị na-ebelata okpomọkụ ahụ.
Ọ na-bụ-eji maka kewara okokụre ngwaahịa si recycled ihe. Mgbe sieving, ruru eru ahụ na-nri n'ime mkpuchi igwe, na-erughị eru ahụ na-nri n'ime vetikal yinye crusher ka regrainate, si otú a na-enweta ngwaahịa nhazi ọkwa na edo nhazi ọkwa nke okokụre ngwaahịa. Igwe ahụ nakweere ihuenyo jikọtara, nke dị mfe iji dozie ma dochie. Ọdịdị ya dị mfe, dị mfe iji rụọ ọrụ ma dị mma. Iguzo ọtọ, ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa na ntinye fatịlaịza.
8. Igwe nkwakọ ngwaahịa:
Ihe mkpuchi nke ihe ruru eru site na igwe nkpuchi rotary obughi nani na eme ka aru ahu di nma, kamakwa ime ka ike nke aru ahu di nma. Igwe na-ekpuchi rotary nakweere teknụzụ mmiri mmiri pụrụ iche na teknụzụ ntụ siri ike iji gbochie igbochi fatịlaịza.
9. Akpaaka akpaaka igwe:
Mgbe emechara ihe ndị ahụ, ha na-akwakọba ya site na igwe nkwakọ ngwaahịa. Igwe nkwakọ ngwaahịa nwere nnukwu akpaaka, ijikọ ọnụ, suture, nkwakọ ngwaahịa na njem, nke na-achọpụta ngwa ngwa ngwa ngwa ma na-eme ka usoro nkwakọ ngwaahịa ahụ rụọ ọrụ nke ọma ma zie ezi.
10. eriri ebu: